टेकुमा कोरोना उपचाररत २ जनाको आयो फेरी यस्तो दोस्रो रिपोर्ट, अब के होला ? — Sanchar Kendra
१आज नेप्से २ हजार अंकमा रोकियो, ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरकाे कारोबार
२सकियो नेकपाको हाइकमाण्ड बैठक, के भयो निर्णय ?
१२आज २०७७ मंसिर १६ गते मंगलबार, यी राशिका लागि हुनेछ एकदमै शुभ, कुन राशिलाई छ तनाव ?
१०मनोज गजुरेलकाे अवस्था गम्भिर बनेपछि पूर्वपत्नी मीना ढकालले लेखिन यस्ताे भावुक स्ट्याटस, रसाए सबैका आखा
टेकुमा कोरोना उपचाररत २ जनाको आयो फेरी यस्तो दोस्रो रिपोर्ट, अब के होला ?
काठमाडौँ । नेपालका दोस्रो र तेस्रो कोरोना संक्रमित बिरामीको २ जनाको दोस्रो रिपोर्ट आएको छ । दुवै जनाको दोश्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ आएको छ । काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दुर्य जना कोरोनाका विरामी उपचाररत छन ।
बुधबार रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि अब दुई दिनपछि फेरि नमुना संकलन गरेर परीक्षण गरिने टेकु अस्पतालले जनाएको छ । ४ चैतमा फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै आएकी १९ वर्षीय युवतीमा चैत १० गते र ६ चैतमा यूएईबाट आएका धादिङका ३४ वर्षीय युवकको चैत १२ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।